समाचार Archives - Page 131 of 183 - Bagaicha.com
किराती देवस्थान हात्तिवनमा वृक्षारोपन सम्पन्न
ललितपुर सानो हात्तिवन किरात माङहिम व्यवस्थापन समिति ललितपरद्वारा गत वर्षहरुमा झै यसवर्षपनि वृक्षारोपन कार्यक्रम सम्पन्न । किरातीहरुको संयुक्त देवस्थान हात्तिवनलाई धार्मिक स्थलका रुपमा विकास गर्नको निमित्त सरकारले सहयोग गर्ने बन तथा वातावरण मन्त्रि शक्ति बहादुर बस्नेतले बताए । उनले भने 'किरातहरुको एकिकृत पहिचानको रुपमा स्थापित यस धार्मिक स्थलमा विकसित हुदै गइरहेको छ, यो हामि सबैको लागी गौरब...
प्रथम तथा दोश्रो बिश्वयुद्धमा मृत्युवरण गरेका वीर गोर्खा सैनिकहरुको सम्मानमा हङकङमा आयोजना भएको क्यूनेट गोर्खा ट्रेलब्लेजर अल्ट्रा ट्रेलरेसलाई हङकङ ट्रेल रनिङ अवार्डमा बेष्ट न्यू रेस अवार्ड प्राप्त भएको छ । २७ जुलाई साँझ वानचाई हङकङमा प्रदान गरिएको अवार्डका लागि अनलाईन भोटिङ समेत भएको थियो । बिश्वमा ट्रेल रनिङ खेलका लागि हङकङ अति चर्चित स्थान हो । अवार्ड प्राप्त गरेपछि प्रतिक्रिया दिदैं गोर्...
सरकार र डा. केसीबीच सहमति, २७ औं दिनमा अनशन तोडियो
काठमाडौँ २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन् । सरकारसँग नौ बुँदे सहमति पश्चात उनले अनशन तोडेका हुन् । तीन दिनदेखिको दुवै पक्षलाई मिलाउने मध्यस्थता गरिरहेका नेकपा नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै केसीलाई जुस खुवाएका थिए । त्यसपछि केसीलाई थप उपचारका लागि आईसीयूमा भर्ना गरिएको ...
२५औँ दिनमा डा.केसी टोली र सरकारबीच वार्ता, वार्ता पुन अाज बस्दै
काठमाडौं २५ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसी टोली र सरकारबीच वार्ता भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको फिर्ता लिनुपर्ने अडान त्यागे पश्चात सरकार र कसी टोलीबीच वार्ता भएको हो । हिजो रातिसम्म चलेको वार्तामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसोधन गर्न अनौपचारिक समझदारी भएको बुझिएको छ । दुबै पक्षले वार्ता सकरात्मक रहेको बताएका छन् । वार्ता पुन आज बस्ने भएको छ । यसअघि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग केसी...
गैर अभिव्यक्तिका कारण कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामा
काठमाडौं कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माफी मागेका थिए तर अभिव्यक्तिको चर्को विरोध पश्चात नेकपा पार्टीको राजीनामा दिन तामाङलार्इ निर्देशन पश्चात मंगलबार उनले राजीनामा दिएका हुन् । हिजाे मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजीनामा घोषणा का...
मृगौला रोगी सन्देश जिमीलाई याक्खा छुम्मा हङकङको सहयोग
२३ जुलाई, हङकङ– मृगौला रोगी सन्देश जिमीको उपचार सहयोगार्थ किरात याक्खा छुम्मा हङकङले ४७ हजार ५ सय २ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । हिजो सोमबार भक्तपुर स्थित सहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा उपचार गर्दै आएका संखुवासभा, धर्मदेवी न.पा., होम्बुङ निवासी २१ वर्षिय सन्देश जिमीलाई अस्पतालमै पुगेर याक्खा छुम्मा हङकङकी उपाध्यक्ष लिला देवानले उक्त रकम बिरामी सन्देश जिमी र वहाँकी ...
नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघले हिजो पत्रकारसम्मेन गरी आन्दोलनको जानकारी दिएको हो । संघले आफ्ना सम्पूर्ण शाखा र देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई चार बुँदे उर्दी पनि जारी गरेको छ । आन्दोलनमा चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकहरुले सञ्चालन गरेको बहिरंग र अन्तरंग सेवा बहिस्कारमा ऐक्यवद्धता जनाएको छ ...
डा. केसीलाई स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारको जिम्मेवारी लिनप्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पुष्पलालको ४० औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. केसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता र सम्वादमा आउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारको जिम्मेवारी लिन समेत आग्रह गरेका छन्। ‘डा. केसीलाई भन्न चाहन्छु, आउनुस् स्वास्थ्य शिक्षामा कसरी सुधार गर्नुपर्छ, तर्कपूर्ण रुपमा आउनुस। बरु तपाई नै ज...
जेठ २ गतेसम्म भिजा लागेका कामदार मलेसिया जान पाउने
काठमाडौँ जेठ २ गतेसम्म काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासबाट राहदानीमा सक्कल ‘भिसा स्ट्याम्पीङ’ भइसकेका नेपाली कामदारहरूले अब मलेसिया जान पाउने भएका छन्। सरकारले आइतबार मलेसिया जान दिने निर्णय गर्दै श्रम मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती गरेको छ। यसबाट कम्तीमा चार सय ५३ जना नेपाली कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् । काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासबाट राहदानीमा सक्कल भिसा प्राप्त भइसकेर पनि अन्तिम श्रम स्वी...
डा. केसीको समर्थनमा बसन्तपुरमा सामुहिक सत्याग्रह
काठमाडौँ २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नागरिकस्तरबाटै काठमाडौँको बसन्तपुरमा सामुहिक सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको अगुवाईमा राजधानीको वसन्तपुर डवलीमा सामूहिक सत्याग्रह गरेका हुन । विहान १० बजे सुरु सत्याग्रह साँझ ५ बजे सम्म सञ्चालन हुने अलायन्सले जनाएको छ । काठमाडौंमा मात्र वार्ता गर्ने अडानका बीच सरकारले डा. केसीलाई बल प्रयोग...
गोविन्द केसीको माग पूरा नभए देशमा आगो बल्छ : पूर्व प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौँ पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले डा. गोविन्द केसीको माग पूरा नभए देशमा आगो बल्ने बताएकी छिन्। शनिबार बानेश्वरमा डा. केसीको समर्थनमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले यो सरकार असहिष्णु बनेको बताइन्। वर्तमान सरकारलाई जनताले मत दिएको आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै उनले भने, ‘तर, सरकारले पनि जनताले भनेको मान्नुपर्छ ।’ डा. केसीले जनताको भावना बोलेको भन्दै कार्कीले उनका माग पुरा ग...
डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश देखि कलाकारसम्म
काठमाडौं चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाडौमा प्रदर्शन भएका छन्। शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि प्रदर्शन सुरु भएको हो। प्रदर्शनमा पूर्व प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, लेखक देखि कलाकार र सर्वसाधारणसम्म सहभागी छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २२ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. केसीको जीवनरक्षा र मागहरुको सम्बोधनका लागि सरकारलाई दब...